ဝှေးစေ့က ဘယ်လိုနေလဲ။ စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 19/11/2021 20:18 | ကျန်းမာခြင်း
ဝှေးစေ့တို့သည်လည်းကောင်း gondolas (လိင်အင်္ဂါဂလင်း) အထီး။ ၎င်းတို့သည် လိင်တံ၏ အောက်ခြေနှင့် နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တည်ရှိသည်။ အရေပြားကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော scrotal sac နှင့် အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် နောက်ထပ်အလွှာအနည်းငယ်ဖြင့် ၎င်းတို့ကို ထားရှိထားသည်။ ကြွက်သားတစ်သျှူး ၎င်းသည် ဝှေးစေ့များကို ပို၍ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် စုစည်းထားသော အိတ်ကို ရှုံ့တွစေမည့် အလွှာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဂလင်းများ သုက်ပိုးထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ကြသည်။ နှင့် လိင်ဟော်မုန်းများ ပါဝင်သည်။ တက်စတိုစတီရုန်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးသားမျိုးပွားမှုစနစ်နှင့် အချိုးအစားအတော်လေးကြီးမားသော glandular အင်္ဂါများအကြောင်းကို သံသယမရှိဘဲ ပြောဆိုနေကြပါသည်။
1 ဝှေးစေ့တွေက ဘယ်လိုပုံစံလဲ။
2 Scrotal ဒေသ
ဤအင်္ဂါများ ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။ အရွယ်အစား လေးမှ ရှစ်စင်တီမီတာ အရှည်နှင့် နှစ်စင်တီမီတာ သို့မဟုတ် သုံးစင်တီမီတာ ကျယ်သည်။ ဝိုင်းထားကြတယ်။ ကပ်ပယ်အိတ်ဟုခေါ်သော အရေပြားအိတ်၎င်းသည် အလွန်ကြမ်းတမ်းပြီး ပျော့ပျောင်းလွန်းသဖြင့် ၎င်း၏အပူချိန်သည် ကျန်ကိုယ်ခန္ဓာထက် 1 မှ 3° လျော့နည်းစေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အသွင်အပြင်၊ အမွေးအမှင် သို့မဟုတ် အရောင်အသွေးသည် ၎င်း၏မျိုးနွယ် သို့မဟုတ် အသက်အရွယ်အလိုက် လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ များစွာမူတည်မည်ဖြစ်သည်။
လူသည် အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်ကဲ့သို့ပင် ၎င်းတို့၏ ဝှေးစေ့များရှိသည်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းမှလာသည်။ခါးကျောရိုး၏ညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်နှင့်ကျောက်ကပ်ဘေးတွင်။ မိခင်၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် အမျိုးသားကလေးသည် ဝမ်းဗိုက်တွင် ဝှေးစေ့များပေါက်ဖွားလာသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ဤဒေသသို့ထွက်ခွာသွားကြသည်။ ပေါင်ခြံဧရိယာသို့ဆင်းပတ်ပတ်လည်ရှိ အိတ်များကို ၎င်းနှင့်အတူ ဆွဲယူကာ နောက်ဆုံးပုံစံကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပါ။
ဝှေးစေ့ အနီရောင် သို့မဟုတ် အဖြူ ပြာရောင်၊ သင့်သွေးကို မည်ကဲ့သို့ သုတ်သင်သည်ဆိုသည့်အပေါ် မူတည်သည်။ ကြီးလေးသောပြဿနာအမျိုးအစားကို သတင်းမပို့ဘဲ တောင့်ခံလိုစိတ်၊ varicose သွေးပြန်ကြောများကဲ့သို့ သေးငယ်သော အဆီအိတ်ငယ်များကို ငယ်စဉ်ကထက် အသက်ကြီးသောအရွယ်တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ဝှေးစေ့ကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ သို့မဟုတ် ဝန်းရံထားတဲ့ ဧရိယာတစ်ခုလုံး၊ အိတ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ရှည်လျားသည်။. perineum ၏ရှေ့နှင့်လိင်အင်္ဂါ၏နောက်ဘက်ရှိအမြှေးပါးဧရိယာအောက်တွင်တည်ရှိသည်။ ဤဒေသတစ်ခုလုံးကို အလွှာများစွာ ခွဲခြားထားသည်။
အရေပြား သို့မဟုတ် ကပ်ပယ်အိတ်: ဆံပင်ပေါက်တဲ့နေရာက အကောင်းဆုံးနဲ့ အပြင်ဆုံးအပိုင်းပါ။
Dartos- ၎င်းသည် ကပ်ပယ်အိတ်အထိ ဆက်သွားသော အလွှာဖြစ်ပြီး ပါးလွှာပြီး ချောမွေ့သော ကြွက်သားမျှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Seros tunic သို့မဟုတ် Cooper's fascia- ၎င်းတွင် ဝမ်းဗိုက်၏ ပိုကြီးသော ထောင့်ဖြတ်ကြွက်သားမှ ထွက်လာသော အမျှင်များနှင့် ဆင်တူသော ခန္ဓာဗေဒ ရှိသည်။ ဤမျှင်များကို ဝမ်းဗိုက်မှ scrotal ဧရိယာဆီသို့ ဆင်းသက်စေရန် ဝှေးစေ့မှ ဆွဲငင်သည်။
ကြွက်သားဝတ်အင်္ကျီ ၎င်းကို သုတ်ပိုးကြိုးနှင့်ပါရှိသော cremaster ကြွက်သားများ ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်း၏ အမျှင်များသည် ဝှေးစေ့မှ ဆင်းသက်လာစေရန် ဝမ်းဗိုက်ရှိ ကျယ်ပြန့်သော ကြွက်သားများ၏ ကြွက်သားမျှင်များမှ လာပါသည်။
Fibrous အင်္ကျီ ၎င်းသည် အိတ်ကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး သုတ်ပိုးကြိုးနှင့် ဝှေးစေ့၏ ဧရိယာကို ဝန်းရံထားသည်။
မိန်းမကိုယ်အင်္ကျီ- ၎င်းသည် ဝှေးစေ့နှင့် epididymis အတွင်းသို့ ခေါက်သွားသော serous membrane တစ်ခုဖြစ်သည်။
Wikipedia နှင့် Google Sites များမှ ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံ။ အိမ်မွေးကြောင်၏ ဝှေးစေ့၊ epididymis နှင့် spermatic funiculus- 1. ရှေ့ပိုင်း၊ 2. Back part, 3. epididymis အစွန်း, 4. အပြင်ဘက်အစွန်း, 5. testicular mesentery,6Epididymis, 7. သွေးကြောများနှင့် သွေးပြန်ကြောများ ကွန်ရက်၊ ဝှေးစေ့၊ 8. Vas deferens ။
ဝှေးစေ့နှင့် epididymis ၎င်းတို့ကို အလွန်ကွဲပြားသော အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် fibrous သို့မဟုတ် albuginous ဟုခေါ်သော အဖုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ 'ဝှေးစေ့အယ်လ်ဘူဂီနီ' ဝှေးစေ့ကို ဖုံးအုပ်သော အရာဖြစ်၏။ အဲ 'epididymal albuginea' epididymis ကိုဖုံးအုပ်။
Testicular albuginea ၊ ၎င်းသည် ဝှေးစေ့ကို ဝန်းရံထားသော အလွန်အမြှေးပါးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အပြင်ဘက်အပိုင်းသည် မိန်းမကိုယ်အင်္ကျီ၏ 'visceral leaflet' ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းသည် ဝှေးစေ့၏တစ်ရှူးများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
လွန်စွာ သာလွန်သော နယ်နိမိတ် အပိုင်း၌ ဖြစ်၏။ 'ပိုမိုမြင့်မားသောခန္ဓာကိုယ်' 'Haller's network' ဟုခေါ်သော သုက်ပိုးပြွန်များ ကွန်ရက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ lamellae သို့မဟုတ် septum အစီအရီသည် ဝှေးစေ့၏အစွန်ဘက်သို့ ချဲ့ထွင်သော Highmore ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ ထွက်သွားပြီး ၎င်းကို lobules အဖြစ်ခွဲထားသည်။
ဝှေးစေ့၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သုက်ပိုးများကို ဖန်တီးသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဒါပေမယ့် တခြားဘာတွေ ဖန်တီးနိုင်လဲဆိုတာကို အနီးကပ် လေ့လာကြည့်ရအောင်။
သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှု: seminiferous tubules များကို tubules နံရံ၏ အပြင်ဘက် အစိတ်အပိုင်းတွင် ဖန်တီးထားသည်၊ ပိုးမွှားဆဲလ်များ။ ဤဆဲလ်များသည် ပထမအဝိုင်းဖြစ်ပြီး ရှည်လာသောကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် ဖြစ်လာသည်။ ရင့်ကျက်သောသုတ်ပိုး. ဤနေရာမှ ၎င်းတို့သည် epidymis၊ vas deferens နှင့် seminal vesicles များဆီသို့ ကူးခတ်ရန် tubules များကိုဖြတ်၍ ၎င်းတို့သည် နောက်ဆုံးတွင် သိမ်းဆည်းထားရမည့်နေရာဖြစ်သည်။
Testosterone ထုတ်လုပ်မှု ၎င်းကို ဖန်တီးရန် တာဝန်ရှိသော Leydig ဆဲလ်များ ပေါကြွယ်ဝသည့် တစ်ချိန်တည်းတွင် tubules များကြားတွင် တည်ရှိနေသည့် ကြားခံတစ်သျှူးများတွင် တွေ့ရှိရသည်။ testosterone ဟော်မုန်း. ဒီဟော်မုန်းကို သွေးကတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ဖြန့်ဝေပေးမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ Testosterone များ မတော်တဆ ကျဆင်းသွားပါက ဝှေးစေ့များသည် မွေးစမှ အလွန်သေးငယ်သောကြောင့် (testicular atrophy) သို့မဟုတ် ဝှေးစေ့တစ်ရှူးများ ဆုံးရှုံးသွားခြင်း၊ သို့မဟုတ် အမျိုးသားများ သွေးဆုံးခြင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် anabolic steroids များကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » ကျန်းမာခြင်း » အထဲမှာ ဝှေးစေ့က ဘယ်လိုလဲ။